မိနျးမကိုယျ သားမှေးလမျးကွောငျး ကဉျြးအောငျလိမျးတဲ့ cream တှအေကွောငျး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အရှယျရောကျပွီးသား အမြိုးသမီးတှေ မေးလရှေိ့တဲ့ Vaginal tract (မိနျးမကိုယျ သားမှေးလမျးကွောငျး) ကဉျြးအောငျလိမျးတဲ့ cream တှအေကွောငျးပွောပွပေးခငျြပါတယျ
ဘယျလိုအမြိုးသမီးတှမှော သားမှေးလမျးကွောငျး ကယျြလာရသလဲ?
3)ခဏခဏ ဝမျးခြုပျတတျသော သူမြား
5)အသကျကွီးသော အမြိုးသမီးမြား မှာဖွဈတတျပါတယျ
3)ကိုယျ့အမြိုးသားအပျေါ ကနြေပျနိုငျမှု မပေးနိုငျခွငျး
5)သားမှေးလမျးကွောငျး ပုံသဏ်ဍနျ မမှနျခွငျးတို့နှငျ့ ရငျဆိုငျရတတျပါတယျ
သားမှေးလမျးကွောငျးကဉျြးအောငျ လိမျးဆေး cream တှလေိမျးလို့ရနိုငျပါသလား?
သားမှေးလမျးကွောငျးကဉျြးစတေဲ့ cream တှေ ဈေးကှကျထဲမှာ အမွောကျအမြား ရောငျးခနြကွေပမေယျ့ အမြားစုက FDA အသိအမှတျမပွုတဲ့ cream တှမြေားပါတယျ
ဈေးကှကျထဲက cream တျောတျောမြားမြားမှာ သုတသေန ပွုစုထားမှုနညျးပါးသလို ပါဝငျပစ်စညျးလဲ အတိအကြ ဖျောပွလမေ့ရှိကွတာတှလေဲ တှရေ့လရှေိ့ပါတယျ
မိမိသဘောအရ စမျးသပျပိုငျခှငျ့ရှိပမေယျ့ အမြားစုက chemical တှပေါတဲ့အတှကျ မြားမြားလိမျးမိရငျ
1)သားမှေးလမျးကွောငျး ယောငျခွငျး (Chemical အမြားအပွားပါဝငျတဲ့အတှကျ သားမှေးလမျးကွောငျးကို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစခွေငျး, ဆီးသှားရနာကငျြခွငျး, လမျးလြှောကျလြှငျ နာခွငျး, ထိုငျလြှငျ နာခွငျးမြားခံစားရတတျပါတယျ)
2)သားမှေးလမျးကွောငျးတှငျ ဓာတျမတညျ့မှုဖွဈပှားခွငျး (သားမှေးလမျးကွောငျး ယောငျခွငျး, ရဲခွငျး, ယားခွငျး, နာခွငျးမြား ခံစားရတတျပါတယျ)
3)သားမှေးလမျးကွောငျးပိုးဝငျခွငျး (ပါဝငျတဲ့ chemical တှကေ သားမှေးလမျးကွောငျးရဲ့ pH ကိုပွောငျးလဲစတေဲ့အတှကျ သားမှေးလမျးကွောငျး ပိုးဝငျခွငျး, မှိုစှဲခွငျးမြား ခံစားရတတျပါတယျ)
5)လိငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျတတျသောရောဂါမြား ပိုမိုဆိုးရှားစခွေငျး (လိငျမှကူးစကျတတျသော ရောဂါတှရေဲ့ ရှပွေ့ေးလက်ခဏာတှကေို မပျေါစတေဲ့အတှကျ ကုသခြိနျနောကျကပြွီး သားမှေးလမျးကွောငျး ပကျြဆီးသှားတတျပါတယျ) မြားခံစားရတတျပါတယျ
တဈခြို့သောနိုငျငံတှရေဲ့ သားဖှားနှငျ့မီးယပျ အထူးကုဆရာဝနျတဈခြို့ကတော့ oestrogen နဲ့ထုတျထားတဲ့ cream တဈမြိုးကို ညှနျးတတျပါတယျ
သားမှေးလမျးကွောငျးဆိုတာ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အရေးပါတဲ့ အင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးဖွဈတဲ့အတှကျ တဈခုခုမလုပျခငျမှာ နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျကုသဖို့လိုအပျပါတယျ
G spot လို့ချေါတဲ့ မိနျးမကိုယျတှငျးမှာ ကာမ ခံစားမှုပေးတဲ့ နရောကို filler ထိုးပွီး ကုသလို့ရပါတယျ
filler ထိုးခွငျးဖွငျ့ သားမှေးလမျးကွောငျး ခွောကျသှမှေု့ကိုလဲ သကျသာစပေါတယျ
ကုသခွငျးဖွငျ့လဲ ဆီးမထိနျးနိုငျခွငျးကို သကျသာစတေဲ့အပွငျ သားမှေးလမျးကွောငျး ခွောကျသှခွေ့ငျး နှငျ့ ကာမဆကျဆံနစေဉျ နာကငျြမှုတို့ကို လြော့ခနြိုငျမှာဖွဈပါတယျ
မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်း ကျဉ်းအောင်လိမ်းတဲ့ cream တွေအကြောင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ Vaginal tract (မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်း) ကျဉ်းအောင်လိမ်းတဲ့ cream တွေအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်
ဘယ်လိုအမျိုးသမီးတွေမှာ သားမွေးလမ်းကြောင်း ကျယ်လာရသလဲ?
3)ခဏခဏ ဝမ်းချုပ်တတ်သော သူများ
5)အသက်ကြီးသော အမျိုးသမီးများ မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်
3)ကိုယ့်အမျိုးသားအပေါ် ကျေနပ်နိုင်မှု မပေးနိုင်ခြင်း
5)သားမွေးလမ်းကြောင်း ပုံသဏ္ဍန် မမှန်ခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်
သားမွေးလမ်းကြောင်းကျဉ်းအောင် လိမ်းဆေး cream တွေလိမ်းလို့ရနိုင်ပါသလား?
သားမွေးလမ်းကြောင်းကျဉ်းစေတဲ့ cream တွေ ဈေးကွက်ထဲမှာ အမြောက်အများ ရောင်းချနေကြပေမယ့် အများစုက FDA အသိအမှတ်မပြုတဲ့ cream တွေများပါတယ်
ဈေးကွက်ထဲက cream တော်တော်များများမှာ သုတေသန ပြုစုထားမှုနည်းပါးသလို ပါဝင်ပစ္စည်းလဲ အတိအကျ ဖော်ပြလေ့မရှိကြတာတွေလဲ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်
မိမိသဘောအရ စမ်းသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့် အများစုက chemical တွေပါတဲ့အတွက် များများလိမ်းမိရင်
1)သားမွေးလမ်းကြောင်း ယောင်ခြင်း (Chemical အများအပြားပါဝင်တဲ့အတွက် သားမွေးလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း, ဆီးသွားရနာကျင်ခြင်း, လမ်းလျှောက်လျှင် နာခြင်း, ထိုင်လျှင် နာခြင်းများခံစားရတတ်ပါတယ်)
2)သားမွေးလမ်းကြောင်းတွင် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပွားခြင်း (သားမွေးလမ်းကြောင်း ယောင်ခြင်း, ရဲခြင်း, ယားခြင်း, နာခြင်းများ ခံစားရတတ်ပါတယ်)
3)သားမွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (ပါဝင်တဲ့ chemical တွေက သားမွေးလမ်းကြောင်းရဲ့ pH ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အတွက် သားမွေးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း, မှိုစွဲခြင်းများ ခံစားရတတ်ပါတယ်)
5)လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်း (လိင်မှကူးစက်တတ်သော ရောဂါတွေရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေကို မပေါ်စေတဲ့အတွက် ကုသချိန်နောက်ကျပြီး သားမွေးလမ်းကြောင်း ပျက်ဆီးသွားတတ်ပါတယ်) များခံစားရတတ်ပါတယ်
တစ်ချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့ သားဖွားနှင့်မီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်တစ်ချို့ကတော့ oestrogen နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ cream တစ်မျိုးကို ညွှန်းတတ်ပါတယ်
သားမွေးလမ်းကြောင်းဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခုခုမလုပ်ခင်မှာ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်
G spot လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမကိုယ်တွင်းမှာ ကာမ ခံစားမှုပေးတဲ့ နေရာကို filler ထိုးပြီး ကုသလို့ရပါတယ်
filler ထိုးခြင်းဖြင့် သားမွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့မှုကိုလဲ သက်သာစေပါတယ်
ကုသခြင်းဖြင့်လဲ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့အပြင် သားမွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့ခြင်း နှင့် ကာမဆက်ဆံနေစဉ် နာကျင်မှုတို့ကို လျော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်